शुभकामना दिन सक्नेले सिधा फोन गर्नुपर्दैन ?: प्रवक्ता शर्मा - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
शुभकामना दिन सक्नेले सिधा फोन गर्नुपर्दैन ?: प्रवक्ता शर्मा
पोखरा । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले सरकारले सिमा विवाद बारे कुनै पहल नगरेको आरोप लगाएका छन । सोमबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रवक्ता शर्माले पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाले गत शनिबार गरेको अभिव्यक्तिकाे बचाउ गरेका छन ।
गत शनिबार पोखराबाटै सभापति देउवाले ‘ओलीसँग सल्लाह गरेर भारतले नक्सा जारी गरेको’ बताएका थिए। उनले भने, सभापति ज्यूले आशंका गर्नु भएको हो, ठहर होइन्,’ । त्यसको जवाफ फर्काइरहनु भन्दा सरकारले भारतसँग जवाफ मागोस्।’ उनले थप्दै भने, ‘कालापानीका विषयमा मिडियालाई खपत हुने गरी विज्ञप्ति आए। भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई जन्मदिनमा विभिन्न भाषामा शुभकामना दिनेले सिधा फोन गर्नुपर्दैन ?,’ शर्माले प्रश्न गरे, ‘यति समय गइसक्यो, मोदीका नाममा आजसम्म एक फोन काठमाडौंबाट गइराखेको छैन।